War dag dag ah Safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo hor-istaagtay qalab loogu deqay Mashruuca GOB ee dhismaha wadada Hobyo-Galkio - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG War dag dag ah Safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo hor-istaagtay qalab...
War dag dag ah Safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya oo hor-istaagtay qalab loogu deqay Mashruuca GOB ee dhismaha wadada Hobyo-Galkio
Safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Kate Foster oo hor-istaagtay kaalmeynta barnaamij hormarineed ee Galmudug
Safiiradda Ingiriiska ayaa si lama filaan ah uga hortmid kaalmo ay soo ogolaadeen deeq-bixiyayaasha iyo hay’adda Somali Stability Fund oo loogu talagalay dhismaha wadada Hobyo-Galkio.
Wadada Hobyo-Galkio waa waddo aad iyo aad muhiim ugu ah nolosha, dhaqaalaha iyo amniga deegaanada Galmudug oo dhan. Shacabka Soomaalida gaar ahaan kuwa Galmudug dibad iyo gudaba waxay deeq ahaan u aruuriyeen lacag ka badan 6 million oo doolar taas oo suurto galisay in boqolkiiba lixdan (60%) la dhameystiro wadada. Deeqaha ka yimid shacabka waxaa lagu dhameystiray 150km, waxaana dhiman 120km wadada.
Ka dib, shir ku dhex maray madaxda hay’adda GOB iyo deeq bixiyayaasha magaalada Nairobi bishii September 2019, ayaa lagu go’aamiyey in kaalmo buuxda la siiyo dhameystirka wadada Hobyo-Galkio. Shirar daba jog u ah kii September 2019, ayey hay’adda Somali Stability Fund (SSF) ayadoo ogolaasho ka heysata deeq-bixiyayaasheeda ku ogolaatay in ay qalab ugu deeqdo dhameystirka wadada.
Nasiib darro, cudurka Covid ayaa dib u dhac ku keenay bixintii qandaraaska qalabka lagu soo gali lahaa. Balse, nasiib waanaag, hay’adda SSF ayaa ku guuleysatay iney dhameystirto howlihii qandaraaska qalab gadidda ayadoo u gudbisay hay’ada FCDO oo horay loo yaqaanay DFID muddo laga joogo saddex bilood si ogolaashe looga helo. Waxaa ah wax laga xumaado in ay safiiradda Ingiriiska Kate Foster ayadoo muddo dhowr bilood ah ku magacaaban safiirnimda ka hortimaaddo ogolaashihii qorshahaan oo muddo sanad iyo bar soo socday.
Ka hor-imaashaha safiiradda mashruuca wadada Hobyo-galkio wuxuu xoojinayaa isku dheeli-tiran la’aanta deeqaha horumarinta Gobolada dalka gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabelle. Go’aanka safiiradda Ingiriiska Kate Foster wuxuu ka tarjumayaa sida Ingiriiska iyo qaar kale oo ka mid ah deeq-bixiyayaasha ay mar kasta u garab maraan Galmudug iyo Hirshabelle ha noqoto horumarinta ama mashaariicda kale ee dalka ka qabsooma.
Shacabka iyo madaxda Galmudug waxay ka codsanayaan safiiradda iney dib uga laabato go’aanka ka hor’imaasha kaalmada wadada Hobyo-Galkio. Shacabka iyo madaxda Galmudug ayagoo ka filayey mashaariic hor-u-marineed oo kale waxay u arkaan wax laga xumaado in la is hor-taago mashuurcii ugu weynaa ee dhanka horumarka ee Galmudug ka qabsooma.
Previous articleAqriso magacyada saraakiishii hogaminayay dagalkii shababka mudug looga saray qeycad,bacadweyn,iyo qodqod oo la dalacsiiyay
Next articleAmbassador Kate Foster has stepped in to stop the support for the most important Galmudug development project – Hobyo-Galkio Road